ပင်တိုင်ကဏ္ဍ | MoeMaKa Burmese News & Media | Page 780
ကာတွန်း – ကူမိုးကြိုး အောက်တိုဘာ ၁၉၊ ၂၀၁၂ No tags for this post.
ကျော်သူ (နာရေးကူညီမှုအသင်း – ရန်ကုန်) အောက်တိုဘာ ၁၈၊ ၂၀၁၂ နိုင်ငံတကာမျက်မမြင် လမ်းလျှောက်တုတ်နေ့ (၂၁) ကြိမ်မြောက် ရန်ကုန်မြို့တော်ဝန်ဖလား မျက်မမြင်လမ်းလျှောက်ပွဲအား ၁၅.၁ဝ.၂ဝ၁၂ ရက်နေ့တွင် ပြည်သူ့ရင်ပြင်မှ ရန်ကုန်မြို့တော်ခန်းမအထိ (၃) မိုင်ခရီးအား ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ကြမည့် ပြင်ဦးလွင်မြို့ “ပရဟိတမျက်မမြင် ပညာသင်ကျောင်း” မှ ကျောင်းသား/သူ (၇၈) ဦးတို့သည် ၁၄.၁ဝ.၂ဝ၁၂ ရက်နေ့ နေ့လည် (၂း၃ဝ) နာရီအချိန်တွင် အမှတ် (၁၃/က)၊ ဗိုလ် မှူးဗထူးလမ်း၊ (၄၂) ရပ်ကွက်ရှိ နာရေးကူညီမှုအသင်း (ရန်ကုန်) ရုံးချုပ်ရှိရာသို့ လေ့လာရေးခရီးစဉ်အဖြစ် လာရောက်ခဲ့ကြသည်။ ပြင်ဦးလွင်မြို့ “ပရဟိတမျက်မမြင် ပညာသင်ကျောင်း” မှ ကျောင်းသား/သူများအား မျက်မမြင် လက်စမ်းစူးဖောက်စာပေ၊ အစိုးရအတန်း...
“ပြည်သူ့ဆန္ဒနဲ့မကိုက်ညီသဖြင့်” လို့ ဆိုနေပါလား တူမောင်ညို၊ ၁၆ အောက်တိုဘာ၊ ၂၀၁၂ “ပြည်သူ့ဆန္ဒ” နဲ့ပတ်သက်လာရင် ဦးသိန်းစိန်တို့ကြံ့ဖွံ့အစိုးရသဘောထားပုံက အနည်းဆုံး ၃ မျိုးလောက်ရှိပုံရတယ်။ – လုံးဝအသိအမှတ်မပြု ငြင်းပယ်ရမယ့် “ပြည်သူ့ဆန္ဒ” – တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း သို့တည်းမဟုတ် တစ်ဝက်တစ်ပျက်သာအသိအမှတ်ပြုရမယ့် “ပြည်သူ့ဆန္ဒ” – သူတို့ စိတ်ကြိုက်စီမံဖေါ်စပ်ထားတဲ့ “ပြည်သူ့ဆန္ဒ” ဒီထက် မကလည်းဖြစ်နိုင်သေးတယ်။ တစ်ချက်ချင်းစီကို ထင်ရှားတဲ့ သာဓကတွေနဲ့ ရှင်းလင်းတင်ပြပါမယ်။ ၁။ လုံးဝအသိအမှတ်မပြု ငြင်းပယ်ရမယ့် “ပြည်သူ့ဆန္ဒ” အနီးအဝေးကာလ လက်တွေ့ဖြစ်ရပ်တွေထဲ ထင်သာမြင်သာအရှိဆုံးဖြစ်ရပ်အချို့ကို ထုတ်နုတ်ဖေါ်ပြလိုက်ပါတယ်။ သာဓက – လက်ပတောင်းကြေးနီးစီမံကိန်းရပ်ဆိုင်းရေး ဒေသတောင်သူလယ်သမားပြည်သူများ၏ ဆန္ဒ – လက်ပံတောင်းကြေးနီးစီမံကိန်းရပ်ဆိုင်းဖျက်သိမ်းရေးဆန္ဒပြမှု “နောက်ကွယ်မှာ ပယောဂ...
ကိုယ်စားများစွာဖြင့် ရုပ်ရှင်သူရဲကောင်းဆုရှင် ကျော်သူ၊ နာရေးကူညီမှုအသင်း (ရန်ကုန်)၊ အောက်တိုဘာ ၁၇၊ ၂၀၁၂ အောက်တိုဘာလ (၁၃) ရက်နေ့သည် မြန်မာ့ရုပ်ရှင်နေ့အဖြစ် သတ်မှတ်၍ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သည်မှာ ၁၃.၁ဝ.၂ဝ၁၂ ရက်နေ့သည် (၉၂) နှစ်ပြည့်မြောက် ရှိခဲ့ပြီဖြစ်သော်လည်း ၂ဝ၁၂ ခုနှစ် မြန်မာ့ရုပ်ရှင်နေ့တွင် ထူးခြားသည့်ဆုများဖြင့် ဝေဝေဆာဆာ ဂုဏ်ပြုကျင်းပခဲ့သည်။ ရုပ်ရှင်အနုပညာလောကထဲမှ ထူးခြားပြောင် မြောက်သည့် စွမ်းဆောင်ချက်များဖြင့် လူမှုအကျိုးများအား စွမ်းစွမ်းတမံ သယ်ပိုးဆောင်ရွက်နေသူများ အတွက် ၂ဝ၁၂ ခုနှစ် “ရုပ်ရှင်သူရဲကောင်းဆု” တံဆိပ်အား ဦးကျော်သူအား ဂုဏ်ပြုချီးမြှင့်ပေးအပ်ခဲ့သည်။ သို့သော်လည်း ဦးကျော်သူသည် အမေရိကန်နိုင်ငံသို့ National Endowment for Democracy 2012 Award ဆုပေးပွဲနှင့် နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်)၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များဖြင့် ရောက်ရှိနေသည့် အချိန်ဖြစ်သည်။ သို့အတွက်...
နှင်း နှင့် မုတ်သုံ ကမာပုလဲ၊ အောက်တိုဘာ ၁၇၊ ၂၀၁၂ လရိပ်မှာ စောင်းခတ်သံတွေ ကြားမိပါစ … နှင်း။ စောင်းကြိုးမှာ တွဲခိုနေတာ ဂီတမှ မဟုတ်တာ…။ ပန်းကလေးတွေ အိပ်စက်နေတာ သွားမနှိုးလိုက်ပါနဲ့ … နှင်း။ ဒီလို လောကကြီးမှာ သူတို့အိပ်မက်တွေလောက် ရိုးသားတာ ဘယ်ရှိနိုင်ပါ့မလဲ …။ ကွက်ကြား အချစ်တွေနဲ့ မုတ်သုံဟာ ပရိယာယ်ဆံဆံ လက်ပြသွားခဲ့ပြီ … ။ လမ်းကလေးတွေဟာ သူပေးခဲ့တဲ့ ဝေဒနာတွေနဲ့ ကြေကွဲမဆုံး …။ ဘ၀တွေကို အသစ်တဖန် ပြန်လည်စတင်ရမယ့် မနက်ဖြန်များစွာ ပန်းပွင့်ကလေးများအတွက်ဆိုရင် မင့်မျက်ရည်စတွေနဲ့ … သူတို့ … အနာတရ ကင်းစေ ။ ။ ( ကမ္ဘာ့...
မှားပြီးရင်းမှား ၃ သားကြီးမောင်ဇေယျ၊ အောက်တိုဘာ ၁၆၊ ၂၀၁၂ ကျနော့်ပန်းချီကားတွေကြည်ပြီး ကျနော်နဲ့ရင်းနှီးတဲ့ သူငယ်ချင်းများက ကျနော်ကို အချိန်နဲ့ နေရာမှားပြီးရောက်လာသူလို့ ပြောကြ ပါတယ်။ ဟုတ်ပါတယ်။ သူတို့ ပြောစကားဟာ ကျနော် အလုပ်ခွင်ထဲရောက်တော့ ပိုမှန်သွားပါတယ်။ ကျနော်လုပ်ရတဲ့ အလုပ်က စာပြင်ဆရာအလုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ အမှားပါရမီထူးချွန်တဲ့ ကျနော်ဟာ စာပြင်တဲ့ အလုပ်ကိုလုပ်ရတော့ ကျနော့်ရဲံအမှားတွေဟာ ဂန္ဓ၀င်မြောက်အမှားတွေဖြစ်လာပါတော့တယ်။ ဒီနေရာမှာ ကျနော်စာဖတ်သူကိုနည်းနည်းပြောပြဖို့လိုပါမယ်။ စာပြင် အလုပ်ဆိုတာ စာအုပ်တစ်အုပ်မရိုက်မီ စာအုပ်မှာပါတဲ့ စာသားတွေကိုသတ်ပုံမှန်မှန်၊ အစိပ် အကျဲမှန်မမှန် စစ်ဆေး ပြင်ဆင်ပေးရတဲ့ အလုပ်ပါ။ စာအုပ်မဖြစ် မီ ခဲစာလုံးနဲ့စီထားတဲ့ စာတွေကို ရေစွတ်ထားတဲ့ စက္ကူနဲ့ မှင်အနည်းငယ်စွတ်ထားတဲ့ စာစီပြီးသား ခဲစလုံးတွေထည့်ထားတဲ့ဘန်းထဲ က စာကို လက်နဲ့ဖိပြီး ပုံနှိပ်ထားစာရွက်ပေါ်မှာထင်လာအောင်လုပ်ရပါတယ်။...
ကာတွန်း ကူမိုးကြိုး – အိုအိုင်စီ တဲ့ဟေ့ … အောက်တိုဘာ ၁၅၊ ၂၀၁၂ No tags for this post.
ဒေါ်စု အမေရိကန်ခရီးစဉ်နဲ့ အဝေးရောက် ပရိသတ်၊ အင်န်အယ်ဒီ နဲ့ လှုပ်ရှားသူများ ကိစ္စ ဦးဝင်းတင်နဲ့ မေးခွန်းများ မိုးမခ၊ အောက်တိုဘာ ၁၄၊ ၂၀၁၂ အင်န်အယ်ဒီပါတီနဲ့ အတိုက်အခံခေါင်းဆောင် ဟံသာဝတီဦးဝင်းတင်နဲ့ မိုးမခမီဒီယာတို့ရဲ့ အင်တာဗျုးကဏ္ဍကို ရပ်နားခဲ့တာ ၁ လ ကျော် ကြာမြင့်ခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ ဧည့်သည်များတဲ့ ဆရာကို တွေ့ဆုံစကားပြောခွင့်ရဖို့ ခက်ခဲသလို ဆရာကိုယ်တိုင်ကလည်း အချိန်ယူပြီး စကားပြောချင်တာကြောင့်မို့ ရက်ချိန်းများ အကြိမ်ကြိမ် ပြောင်းခဲ့ရတာလည်း ရှိပါတယ်။ တွေ့ဆုံခွင့်ရချိန်မှာ ဆရာ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေကို မေးမြန်းရာမှာ ဆရာဝန်ကြီးများက ဆရာရဲ့ ကျန်းမာရေး ဆေးစစ်မှုတွေ လုပ်ဖို့ အကြိမ်ကြိမ် တောင်းဆိုထားတာကို ခုချိန်ထိ အချိန်ရွှေ့ဆိုင်းနေဆဲပဲ ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ အဓိက ဆရာကိုယ်တိုင် စိတ်ဝင်စားတာကတော့ ပြည်ပရောက်...
ပေးဆပ်သူတဦးရဲ့ ထာဝရအနုပညာ နာရေးကူညီမှုအသင်း (ရန်ကုန်)၊ ကျော်သူ နဲ့ မေးခွန်းများ အပိုင်း ၂ မိုးမခ၊ အောက်တိုဘာ ၁၄၊ ၂၀၁၂ မေး။ ။ ဒါဆိုရင် တရားဥပဒေစုိုးမိုးရေးပေါ့။ အမှန်အတိုင်း၊ တရားတဲ့အတိုင်း ဖြစ်ဖို့ပေါ့။ အသင်းအဖွဲ့ထဲမှာ အငြင်းပွားကြတယ်၊ ကိုယ့်ဖက်က အားကိုးအားထားပြုရမယ့် တရားဥပဒေစိုးမုိုးရေး မဏ္ဍိုင်ကလည်း မရှိဘူး။ ဒါဆိုရင် တရားသဖြင့် ဖြစ်အောင် အကိုတို့အနေနဲ့ အသင်းအဖွဲ့အနေနဲ့ ဘယ်လိုလုပ်ပြီး ဖော်ဆောင်မလဲ၊ အဆုံးအဖြတ်ကို ရယူမလဲ။ ဒီလိုမျိုး မေးရတာက ကျနော်တုို့ ကွန်မြူနီတီတွေမှာ အပြင်မှာ အသင်းအဖွဲ့တွေမှာ အငြင်းပွားကြတယ်၊ သူမှန်တယ်၊ ကိုယ်မှန်တယ် အနိုင်လုကြတယ်၊ ဒါတွေကို ဘယ်လိုမျိုး ကျော်လွှားမလဲဆိုတာကို အကို့အတွေ့အကြုံဖက်ကနေ ဖြေပေးပါ။ ဖြေ။ ။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်...
ကွယ်လွန်သူ ဗိုလ်ချုပ်ကျော်ဇော သို့ မောင်စွမ်းရည်၊ အောက်တိုဘာ ၁၄၊ ၂၀၁၂ ပြည်သူ့ ကျော်ဇော၊ ဘကျော်ဇောအတွက် နှုတ်ဆက်ကဗျာ ပူဇော်ပါအံ့။ နယ်ချဲ့ဆန့်ကျင်၊ တိုက်ပွဲဝင်သူ။ ဖက်ဆစ်ဂျပန်၊ တော်လှန်ခဲ့သူ။ ကျူးကျော်တရုတ် တိုက်ထုတ်ခဲ့သူ။ တော်လှန်တပ်မတော် ဖော်ဆောင်ရာမှာ ဦးဆောင်ပါသူ။ မှိုင်းနဲ့အတူ ချိူးဖြူလွှတ်သူ ခေတ်အဆက်ဆက် ပြည်သူ့ဖက်က လက်နက်ကိုင်သူ။ ထိုသူသည်ကား … ဘ၀တပါးသို့ ပြောင်းသွားခဲ့ပြီ ကြယ်နီအဖြစ် မိုးပြာမြင့်သို့ လွင့်တက်သွားပြီ။ ထိုကြယ်နီသည် ကမ္ဘာတည်သရွေ့ မြန်မာပြည်အတွက် ကြယ်နီလမ်းပြ ဖြစ်စေသတည်း။ ကဗျာဆရာ ဒို့သူငါလည်း ကမ္ဘာဆက်ဆက် ဘ၀ဆက်ဆက် ဒို့ဘသက်ရှည် ကြယ်နီနီကို ကြည်ညိုဖော်ညွှန်း မော်ကွန်းကဗျာ ရေးစီကာလျှင် ပါရမီဖြည့်ဖက် တော်လှန်ဖက်ဟု ရဲဘက် ရဲဘော် ဖြစ်စေသော်။ ။...
Page 780 of 823«1...778779780781782...823»
မောင်စိန်သော် ● လွယ်ပန်လုံတိုက်ပွဲ - အပိုင်း (၂)
မင်းညွန့်လှိုင် - အ ခ န်းဆ က်ရောမ န္တိ က
Join 93,021 other subscribers
နှစ်အလိုက် ပြန်ရှာရန် Select Month March 2018 (79) February 2018 (145) January 2018 (195) December 2017 (157) November 2017 (193) October 2017 (154) September 2017 (148) August 2017 (163) July 2017 (180) June 2017 (195) May 2017 (240) April 2017 (190) March 2017 (243) February 2017 (253) January 2017 (234) December 2016 (210) November 2016 (276) October 2016 (257) September 2016 (238) August 2016 (262) July 2016 (256) June 2016 (238) May 2016 (292) April 2016 (271) March 2016 (286) February 2016 (277) January 2016 (245) December 2015 (281) November 2015 (330) October 2015 (356) September 2015 (303) August 2015 (299) July 2015 (245) June 2015 (229) May 2015 (125) April 2015 (163) March 2015 (227) February 2015 (199) January 2015 (225) December 2014 (216) November 2014 (198) October 2014 (226) September 2014 (209) August 2014 (242) July 2014 (240) June 2014 (214) May 2014 (252) April 2014 (242) March 2014 (230) February 2014 (234) January 2014 (281) December 2013 (237) November 2013 (205) October 2013 (246) September 2013 (261) August 2013 (295) July 2013 (285) June 2013 (248) May 2013 (249) April 2013 (441) March 2013 (285) February 2013 (267) January 2013 (319) December 2012 (309) November 2012 (248) October 2012 (229) September 2012 (209) August 2012 (242) July 2012 (281) June 2012 (264) May 2012 (230) April 2012 (222) March 2012 (230) February 2012 (187) January 2012 (279) December 2011 (286) November 2011 (237) October 2011 (277) September 2011 (234) August 2011 (193) July 2011 (248) June 2011 (286) May 2011 (194) April 2011 (256) March 2011 (224) February 2011 (153) January 2011 (179) December 2010 (167) November 2010 (218) October 2010 (219) September 2010 (228) August 2010 (163) July 2010 (163) June 2010 (175) May 2010 (190) April 2010 (158) March 2010 (158) February 2010 (143) January 2010 (156) December 2009 (160) November 2009 (143) October 2009 (128) September 2009 (126) August 2009 (139) July 2009 (163) June 2009 (149) May 2009 (199) April 2009 (150) March 2009 (172) February 2009 (135) January 2009 (144) December 2008 (127) November 2008 (140) October 2008 (142) September 2008 (142) August 2008 (159) July 2008 (122) June 2008 (114) May 2008 (155) April 2008 (148) March 2008 (129) February 2008 (127) January 2008 (104) December 2007 (71) November 2007 (110) October 2007 (42)
စိုးလင်း ● အနှစ်သုံးဆယ် https://t.co/xgObKMucjZ https://t.co/7CFGN403o1 about5hours ago ReplyRetweetFavorite
ဇင်လင်း ● နိုင်ငံတကာရှေ့နေများ လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ အစည်းအရုံး (IBAHRI) ၏ “မြန်မာနိုင်ငံ စစ်ဖက်ဆိုင်ရာနယ်ပယ်နှင့် တ… https://t.co/sGdg5Lmyzt about6hours ago ReplyRetweetFavorite
တည်ဘွားဦး – ကစားပွဲ https://t.co/6ZNAI2iZpF https://t.co/k4PJDcnPM7 about 11 hours ago ReplyRetweetFavorite
မောင်မောင်စိုး ● နှင်းဆီနီနီ အိပ်မက်များ (၁၉၇၅ – ၁၉၈၀) – အပိုင်း (၆၀) https://t.co/uiyZJKaHRs about 14 hours ago ReplyRetweetFavorite
မောင်နောင်မွန် ● အမှိုက်၊ အဟောင်းဆိုင်လေးနှင့် ကျွန်တော့်အတွေး https://t.co/S1vm14yDAs https://t.co/bJZWOs0yrN about 16 hours ago ReplyRetweetFavorite
ဇော်အောင် (မုံရွာ) (142)
Cartoon Box (3,344)